Travel – NU MYAT AROUND THE WORLD
September 27, 2021 Posted in AsiaTagged Asia, bhutan, culture, TravelLeaveacomment
May 24, 2021 Posted in Asia, Heritage, Travel, UncategorizedTagged armenia, Asia, Europe, TravelLeaveacomment
ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ပထမဆုံးကျင့်သုံးခဲ့သည့် အာမေးနီးယား
Written and Photo by Dr. Nu Myat Theingi Oo
အာမေးနီးယားနိုင်ငံသည် ရှည်လျားသော သမိုင်းကြောင်း၊ လှပသောရှုခင်းများနှင့်ပြည့်စုံသည့် အာရှတိုက်အနောက်မြောက်ပိုင်းရှိ ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံငယ်လေး ဖြစ်သည်။ အနောက်ဘက်တွင် တူရကီ၊ မြောက်ဘက်တွင် ဂျော်ဂျီယာ၊ တောင်ဘက်တွင် အီရန်၊ အရှေ့ဘက်တွင် အဇာဘိုင်ဂျန်၊ အနောက်တောင်ဘက်တွင် အဇာဘိုင်ဂျန်၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ Nakhchivan တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ထိစပ်နေပါသည်။
အာမေးနီးယားသည် ကော့ကေးဆပ်တောင်တန်းကြီး၏ တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိကာ တောင်ထူထပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ပျမ်းမျှအမြင့်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ပေ ၅၉၀၀ ဖြစ်ကာ မြေနိမ့်နိမ့်မရှိပါ။ တောင်ထူထပ်သောနိုင်ငံဖြစ်သည့်အားလျော်စွာ ရှုခင်းအမျိုးမျိုးနှင့် အသေးစား ရာသီဥတုအမျိုးမျိုးကို ဖန်တီးပေးနေသည်။ နိုင်ငံ၏အကျယ်အဝန်းမှာမူ ၁၁၄၈၄ စတုရန်းမိုင်သာ ကျယ်ဝန်းပါသည်။
အာမေးနီးယားသည် လူမျိုးစုတစ်စုတည်းဖြင့်သာ ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံအနည်းငယ်အနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူဦးရေ၏ ၃% မှလွဲ၍ ကျန်လူဦးရေသည် အာမေးနီးယန်းလူမျိုးများဖြစ်သည်။ အာမေးနီးယားတွင် လူဦးရေပေါင်း ၃ သန်းရှိပြီး လက်ရှိတွင် နိုင်ငံတွင်းနေထိုင်သော အာမေးနီးယန်း လူမျိုးများထက် ပြင်ပသို့သွားရောက်နေထိုင်သူများ ပိုများပါသည်။ ၁၉၁၅ ခုနှစ် အာမေးနီးယား လူမျိုးတုံး သတ်ဖြတ်မှုတွင် အားမေးနီးယားလူမျိုး တစ်သန်းကျော် သေဆုံးခဲ့ပြီးနောက် ပထမကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင် လူအများအပြားသည် နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ပြေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အာမေးနီးယားလူမျိုးများသည် ချောမောလှပကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိကြပြီး ကမ္ဘာကျော် ကာဒစ်ရှန်ညီအစ်မများသည် အာမေနီးယန်းသွေးနှောများဖြစ်ကြသည်။
အာမေးနီးယားသည် နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာ တည်ရှိခဲ့သည့် သက်တမ်းအရင့်ဆုံး ရှေးဟောင်းနိုင်ငံများအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ အာမေးနီးယားတွင် တွေ့ရှိခဲ့သည့် ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရင့်ဆုံး သားရေဖိနပ်သည် ဘီစီ ၃၅၀၀ ကတည်းက ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ အာမေးနီးယားသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ပထမဆုံးကျင့်သုံးခဲ့သောနိုင်ငံဖြစ်ပြီး ယနေ့ထိတိုင် ခရစ်ယာန်နိုင်ငံဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်။ အေဒီ ၃၀၁ တွင် အာမေးနီးယား၌ ခရစ်ယာန်ဘာသာကို နိုင်ငံဘာသာအဖြစ် ပထမဆုံးသတ်မှတ်ခဲ့သည်။
ထောင်စုနှစ်များစွာသက်တမ်းရှိ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှသည် ပြိုလဲနေသော ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများအထိ အာမေးနီးယားတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာ ဝတ်ပြုပူဇော်ရာ ကျောင်းပေါင်းများစွာ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့်လည်း “ဘုရားကျောင်းများရှိရာမြေ” ဟုခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ဘုရားကျောင်းများ အားလုံးသည် ခမ်းနားလှပလှပြီး ထိုဘုရားကျောင်းများအနက် ၉ ရာစုက ဆောက်ထားသည့် Tatev ဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ လှပသည့်ရှုမျှော်ခင်းများ ဝန်းရံထားသည့် ရှေးဟောင်းအဆောက်အဦး တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထိုဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် Halizor ရွာကို ဆက်သွယ်ထားသည့် ကောင်းကင်ရထားလမ်းသည် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး တစ်ဆက်တည်းသွားသော ကောင်းကင်ရထားလုံး အဖြစ် ဂင်းနစ်စံချိန်ချိုးထားပါသည်။
အာမေးနီးယားတွင် ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ်နေရာသုံးခုရှိပြီး ယင်းတို့မှာ Geghard ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ Sanahin နှင့် Haghpat ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများနှင့် ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံး ဘုရားကျောင်း တစ်ခုဖြစ်သည့် Echmiadzin ဘုရားကျောင်း တို့ဖြစ်သည်။ အာမေးနီးယား၏ အမျိုးသားသင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြင့်မြတ်သည်ဟု ယူမှတ်ကြသည့် တူရကီနိုင်ငံရှိ အာရာရက်တောင်ရှုခင်းကိုကောင်းစွာ လှမ်းမြင်နိုင်သည့် Khor Virap ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းနှင့် Zvartnots ဘုရားကျောင်း၊ Garni ဘုရားကျောင်းနှင့် Noravnak ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတို့မှာလည်း ထင်ရှားသည်။ အာမေးနီးယားတွင် ယူနက်စကို ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ် စာရင်းသွင်းခံခဲ့ရသည့် အစားအစာလည်းရှိကာ အာမေးနီးယား ရိုးရာအစားအစာဖြစ်သည့် Lavash ပေါင်မုန့်အပြားဖြစ်ပါသည်။
အာမေးနီးယားတွင် ဆာဗန်အမည်ရှိ ရေကန်ကြီးက နိုင်ငံ၏ ၆ ပုံတစ်ပုံခန့်ကိုနေရာယူထားပါသည်။ စိမ်းပြာကြည်လင်နေသော ရေပြင်၊ ကမ်းခြေကဲ့သို့ဖြစ်နေသော မြစ်ကမ်းတို့ကြောင့် အာမေးနီးယားလို ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံအတွက် ပင်လယ်သဖွယ်ဖြစ်နေကာ အပန်းဖြေသူများနှင့် စည်ကားလျှက်ရှိပါသည်။ တောင်များသည့် အာမေးနီးယားတွင် နှင်းလျှောစီးစခန်းများရှိပြီး နာမည်အကျော်ဆုံးမှာ Tsakhkadzor နှင်းလျှောစီးအပန်းဖြေစခန်းဖြစ်သည်။ Dilijin အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ Aragats တောင်၊ Arpi ရေကန်၊ Shaki ရေတံခွန်တို့မှာ အာမေးနီးယားရှိ ထင်ရှားသည့် သဘာဝအလှတရားတချို့ဖြစ်သည်။
အာမေးနီးယား၏မြို့တော်မှာ ယာရာဗန် (Yeravan) မြို့ဖြစ်ကာ ကမ္ဘာ့သက်တမ်းအရှည်ဆုံး မြို့ကြီးများအနက် တစ်မြို့ဖြစ်သည်။ မြို့ထဲ အဆောက်အအုံအတော်များများက ပန်းရောင်သန်းသဖြင့် “ပန်းရောင်မြို့တော်”ဟုလည်း ရည်ညွှန်းကြပါသည်။ ရှေးဟောင်းအဆောက်အအုံများစွာရှိသည့် ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ Gyumri၊ ရေပူစမ်းများစွာရှိသည့် Spa မြို့ Jermuk၊ အရသာရှိသည့်ဝိုင်များစွာ ထုတ်လုပ်ရာ Areni ရွာ၊ သက်တမ်းနှစ်ပေါင်း ၁၆၀၀ ရှိ အာမေးနီးယားအက္ခရာ အမှတ်တရအဖြစ် ဖန်တီးထားသော အာမေးနီးယားအက္ခရာပုံသဏ္ဏာန်ရုပ်တုများ၊ Amberd ခံတပ်ကြီး၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံရှိ Stonehenge ကဲ့သို့ ကျောက်တုံးပေါင်း ၂၂၃ ခုကို စက်ဝိုင်းသဏ္ဏာန်ထောင်ထားသည့် Karahunj Observatory တို့မှာ အာမေးနီးယားရောက် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ သွားရောက်လည်ပတ်လေ့ရှိသည့်နေရာများဖြစ်ကြသည်။
November 16, 2019 April 20, 2021 Posted in Adventure, Animals, Asia, Heritage, Leisure, UncategorizedTagged adventure, Asia, Experience, Travel2 Comments
ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ ဘူတန်ရဲ့ ထူးခြားချက် (၁၂)ချက်
ဘူတန်တဲ့…. ဘူတန်ဆိုတာကြားတာနဲ့တင် အေးချမ်းလှတဲ့ နိုင်ငံလေးကို မြင်ယောင်ကြမှာပါ။ ဒဏ္ဏာရီလာနိုင်ငံလေးတစ်ခုလို ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံလေးက တကယ်ဆို ပေါ်လာတာ နှစ်၁၀၀ ပဲ ရှိသေးတာတဲ့လေ။ ဘူတန်မှာ ရှုခင်းတွေက သာယာလှပသလို လူတွေကလည်း ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းနေပုံပေါက်ကြပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ယုံကြည်ကိုးကွယ်ကြပြီး ဗုဒ္ဓရဲ့ အဆုံးအမကို နာခံကြတာကြောင့်ပါ။ ဒါကြောင့်လည်း ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာပေါ့။
ကမ္ဘာ့ဆင်းရအခက်ဆုံးလေဆိပ်၊ ကမ္ဘာမှာ လူမတက်ရသေးတဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်၊ ကမ္ဘာ့တစ်ခုတည်းသော မီးပွိုင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံ စတဲ့ ကမ္ဘာ့စံချိန်ချိုးထားတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်တဲ့လေ။ ချောမောလှပငယ်ရွယ်တဲ့ ပညာတတ်ဘုရင်နဲ့မိဖုရားတို့ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း၊ ရိုးရာဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီး ရိုးရာအိမ်လေးတွေမှာနေထိုင်ကြတဲ့ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေစတဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံရဲ့ ထူးခြားပြီး စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အချက်တွေရယ်…. သွားလည်သင့်တဲ့နေရာတွေရယ်ကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
စက်တင်ဘာလတုန်းက Mighty Travels နဲ့ သွားခဲ့တဲ့ ဘူတန်ခရီး Review အတိုချုံးပြီးတင်မယ်စိတ်ကူးပေမဲ့ ဘူတန်နိုင်ငံက တအားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလို့ သေသေချာချာလေးရေးလိုက်တာ နည်းနည်းတော့ ရှည်သွားတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်ကြည့်ကြပါနော်။
ဘူတန်ကို ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံလို့ တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတာဟာ ဘူတန်က တခြားနိုင်ငံတွေလို လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဝင်ငွေပေါ်မတိုင်းတာဘဲ ပျော်ရွှင်မှုကိုသာတိုင်းတာတဲ့ နိုင်ငံလေးမို့လို့ပါ။ Gross National Happiness (GNH) ကို တိုင်းတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လို့ ဘူတန်မှာတွေ့ရတဲ့ လူအတော်များများ အေးချမ်းပျော်ရွှင်နေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒါဟာ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေလို့မဟုတ်ပေမဲ့ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်တတ်တဲ့စိတ်၊ ရိုးရှင်းစွာနေထိုင်တတ်တဲ့စိတ်တွေကြောင့် စိတ်ချမ်းသာ ပျော်ရွှင်ကြရတာပါ။
ဘူတန်ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်က Land of Thunder Dragon မိုးကြိုးနဂါးတိုင်းပြည် ပါ။ ဘူတန်မှာ မိုးခြိမ်းရင် ကြောက်စရာကောင်းတော့ မိုးခြိမ်းတာက နဂါးတို့ရဲ့ အရိပ်အရောင်လို့ ယူဆကြပြီး ဒီလို နာမည်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘူတန်ရဲ့ အလံမှာ သာသနာ့အရောင်ဖြစ်တဲ့ အဝါနဲ့လိမ္မော်တြိဂံ ၂ခုဆက်ထားတဲ့အပေါ် နဂါးရုပ်ကြီးထပ်ထားတာပါ။
(3) Tourism ကန့်သတ်ထားတဲ့နိုင်ငံ
ဘူတန်ကိုသွားလည်ချင်ရင် တခြားနိုင်ငံတွေလို Budget Trip သွားလို့မရပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အစိုးရက Tourist တွေအနေနဲ့ တစ်ရက်ကို US$ 250 (မြန်မာငွေ ၄သိန်းနီးပါး) အနည်းဆုံးသုံးဖို့ ကန့်သတ်ထားလို့ပါ။ အဲ့ထဲမှာ3star အဆင့်ရှိတဲ့ ဟိုတယ်၊ အစားအသောက်၊ အကြိုအပို့၊ ဝင်ကြေး အကုန်ပါပါတယ်။ ဒီလိုဈေးတင်ထားရတာဟာ နိုင်ငံထဲကို အပြင်လူတွေအများကြီးဝင်လာရင် ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွေ ပျက်စီးမှာစိုးတာကြောင့်ပါတဲ့။ Idea လေးမဆိုးဘူးနော်။ အဲ့လိုလေး ချေထားလို့လည်း နိုင်ငံကို ပိုစိတ်ဝင်စားလာကြတာပါ။
ဘူတန်အကြောင်းပြောရရင် ဘူတန် ဘုရင်မိသားစုအကြောင်းချန်ထားလို့မရပါဘူး။ လက်ရှိဘုရင်နဲ့ မိဖုရားရယ်၊ သားတော်လေးရယ်က ချောမွေ့လှပလွန်းလို့ ကမ္ဘာကျော်နေတာပါ။ ဘုရင်ကြီးရဲ့အသက်က ၃၈နှစ်ပဲရှိသေးပြီး မိဖုရားလေးက ဘုရင်ကြီးနဲ့ အသက်(၁၀)နှစ်ကွာပါတယ်။ ၂ယောက်လုံးက ကမ္ဘာကျော်တက္ကသိုလ်တွေက ဘွဲ့ရပညာတတ်တွေတဲ့လေ။ သားတော်လေးဆို အသက် ၃နှစ်ကျော်ကျော်လေးပဲရှိတယ်။ အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ။
ဘူတန်နိုင်ငံ က ဘုရင်တွေ အုပ်ချုပ်တဲ့ ဒဏ္ဏာရီလာနိုင်ငံလေးလို ဖြစ်နေပေမဲ့ သက်တမ်းက ပြောရမယ်ဆိုရင် နှစ် ၁၀၀ ပဲရှိသေးတာပါ။ တိဘက်နဲ့ အိန္ဒိယက ပြည်နယ်စုတွေပေါင်းစည်းပြီး Kingdom of Bhutan ဆိုပြီး ၁၉၀၇ခုနှစ်ကမှ စတင်တည်ထောင်ခဲ့တာပါတဲ့။ ဘုရင်မင်းဆက်ဆိုလည်း အခုမှ ၅ဆက်မြောက်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၂၀၀၈ခုနှစ်က နန်းတက်ခဲ့တဲ့ ၅ဆက်မြောက်ဘုရင်နာမည်က ဂျေမီ ခေဆာ နမ်ကျယ် ဝမ်ချူး တဲ့။ ဝမ်ချူမိသားစုကဆင်းသက်လာတော့ အတိုကောက်အနေနဲ့ ဂျေမီဝမ်ချူးကို မှတ်ထားလို့ရတယ်။ ဂျေမီဝမ်ချူးဆိုတာ ဘုရင်တိုင်းမှာရှိတဲ့ နာမည်ပေါ့။ ခလယ်ကနာမည်တွေပဲ ပြောင်းသွားတာပါ။
(5) ရိုးရာအဆောက်အအုံတွေပဲ ဆောက်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံ
ဘူတန်မှာထူးခြားတာက အဆောက်အအုံတွေပါ။ ရိုးရာ အဆောက်အအုံတွေနေရာတိုင်းမှာတွေ့ရတယ်။ လေဆိပ်က အစ ရိုးရာအငွေ့အသက်လွှမ်းခြုံနေတယ်။ ဘူတန်မှာ အထပ်မြင့်ဆောက်ခွင့်မရှိဘူး။ အမြင့်ဆုံးမှ ၆ထပ်အထိပဲရှိတာ။ အဆောက်အအုံတွေကိုလည်း ရိုးရာစတိုင်နဲ့ပဲဆောက်ခွင့်ရှိတယ်တဲ့။ International Company တွေ ဟိုတယ်တွေကအစ ထူးခြားပြီး ဆောက်လို့မရဘူးတဲ့လေ။
နောက်သတိထားမိတာတစ်ခုက အိမ်ခေါင်မိုးတွေပေါ် ကျောက်ခဲတွေခင်းထားတာကိုပါ။ ဘူတန်မှာက တောင်ကြားကိုဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေက အရမ်းပြင်းလို့ ခင်းထားရတာပါတဲ့လေ။
(6) ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ကြတဲ့ နိုင်ငံ
ဘူတန်မှာသတိထားမိတာ လူအတော်များများ ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်ကြတယ်။ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေရယ်၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေရယ်၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေရယ်အနေနဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံကို မဝတ်မနေရလို့ သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ ဘူတန်ရိုးရာဝတ်စုံတွေမှာ ယောကျာ်းဝတ်ကို Gho ဂိုလို့ခေါ်တယ်။ ဂါဝန်လိုလို၊ ကုတ်အရှည်လိုလိုအပေါ်ဝတ်ကို အောက်ကဘောင်းဘီရှည်မဝတ်ဘဲ ခြေအိတ်အရှည်ရယ် ရှူးဖိနပ်ရယ်နဲ့တွဲဝတ်ရတာပါ။
မိန်းမဝတ်ကိုတော့ Kira ကီရာလို့ခေါ်ပါတယ်။ ရှမ်းဝတ်စုံနဲ့ဆင်ပြီး ပိုးလို ဖဲလိုခပ်ပြောင်ပြောင်အစနဲ့ အပေါ်ဝတ်အင်္ကျီလက်ရှည်ကို အောက်က ထမီလိုရိုးရာအစနဲ့တွဲဝတ်တာပါ။ ထမီနဲ့ဆင်ပေမဲ့ ဝတ်ပုံဝတ်နည်းမတူပါဘူး။ အနောက်ကနေပြန်ပတ်ပြီး ကပ်ခွာတွေရော ချိတ်တွေရောသုံးပြီးဝတ်ရပါတယ်။ ဝတ်စုံတွေကလည်း ဈေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်။ ထမီအဆင်တွေက လက်နဲ့ယက်ကြတာဆိုတော့ ဈေးကြီးကြတယ်။ တစ်စုံကို တစ်သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်။ တစ်ထည်ကို ၂၃သိန်းတန်ထမီတောင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
Mighty Travels က ဧည့်သည်တွေကို ရိုးရာဝတ်စုံတွေ တစ်စုံဆီ လက်ဆောင်ပေးတာဆိုတော့ သင်ဖူးပွဲတော်သွားတက်တဲ့အခါ ကိုယ်တွေက ရိုးရာဝတ်စုံကို ဝတ်ပြီး ပွဲတက်ခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံဝတ်မယ်ဆိုရင် ဖြစ်ကတတ်ဆန်းပေးမဝတ်ပါဘူး။ ဝတ်စုံပြည့်ဝတ်မှ ရမှာတဲ့။ ဥပမာ- မိန်းကလေးတွေဆို အပေါ်ကရိုးရာပုဝါတင်ပြီး ဝတ်ရတယ်။ ယောကျာ်းလေးတွေဆိုလည်း ခြေအိတ်ရှည်နဲ့ဝတ်ရတယ်။ ဝတ်စုံပြည့်မဝတ်ရင် မလေးစားရာကြတယ်ဆိုလို့ လိုအပ်တဲ့ Accessories တွေထပ်ဝယ်ခဲ့ပြီး ဝတ်စုံပြည့်ပွဲတက်ခဲ့ကြပါတယ်။
(7) ဘာသာရေးလိုက်စားတဲ့ နိုင်ငံ
ဘူတန်က ဘာသာရေးကို လေးလေးနက်နက်ယုံကြည်ကြပါတယ်။ မဟာယာန ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်ပြီး တချို့ကျေးရွာတွေမှာ နတ်ကိုးကွယ်တာလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ သာသနာပိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ဆရာတော်က ဘုရင့်လောက်နီးနီး သြဇာရှိပါတယ်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့နိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့အလျောက် Criminal Case လည်း အရမ်းနည်းပါတယ်။
ဘူတန်စေတီက လေးထောင့်ပုံစံ စေတီပါ။ စေတီကို ချော်တန် လို့ခေါ်ပါတယ်။ အောက်ဆုံးလေးထောင့်ပုံက မြေကြီးဓာတ်ဖြစ်ပြီး အပေါ်မှာ ရေဓာတ်၊ မီးဓာတ်၊ လေဓာတ် အဆင့်ဆင့်တင်ထားတာပါ။ အောက်ဆုံးလေးထောင့်က လောကစောင့်နတ်ကြီးလေးပါးကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ အပေါ်က စေတီအဝိုင်း လေးခုက ပွင့်ပြီးသားဘုရားလေးဆူကို ကိုယ်စားပြုပြီး ၁ခုပဲဆို နောင်ပွင့်မယ့်ဘုရားကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။ ဘုရားစေတီတွေကိုပတ်မယ်ဆိုရင် လက်ယာရစ် ပတ်လေ့ရှိကြပါတယ်။
Prayer Wheel လို့ခေါ်တဲ့ လက်နဲ့လှည့်ရတဲ့ ခေါင်းလောင်းတွေရယ်၊ Prayer Flag လို့ခေါ်တဲ့ မကောင်းဆိုးဝါးတွေကိုနှင်တဲ့ ဂါထာမဌာန်တွေရေးထားတဲ့ အလံအဖြူ or အလံရောင်စုံတွေရယ်ကိုလည်း နေရာအတော်များများမှာတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။
(8) သက်ရှိတွေ ကာကွယ်တဲ့ နိုင်ငံ
ဘူတန်မှာ အပင်ရော၊ တိရစ္တာန်ရော လွတ်လပ်စွာရှင်သန်ခွင့်ရှိတယ်။ အပင်တွေကို သက်ရှိလို့ သတ်မှတ်တဲ့အတွက် ဘူတန်ရောက်ရင် ပန်းတွေလှလို့မခူးပါနဲ့။ အာပတ်သင့်ပါလိမ့်မယ်။
ဘူတန်မှာ အကောင်တွေသတ်တာကိုလည်း ပြင်းပြင်းထန်ထန်တားမြစ်ပါတယ်။ ရှားပါးတိရစ္ဆာန်ဖြစ်တဲ့ ဘူတန်မှာပဲ တွေ့ရတဲ့ လည်တံမည်းကြိုးကြာငှက်ကို သတ်ရင် ထောင်ဒဏ်တစ်သက်တစ်ကျွန်းကျတဲ့အထိ အပစ်ကြီးပါတယ်။ အဲ့ငှက်တွေ ကျက်စားလေ့ရှိတဲ့နေရာမှာဆို အစားအသောက်ကောင်းအောင် ရေမြေထိန်းသိမ်းပေးထားတာတဲ့။ ငှက်တွေထိခိုက်မှာဆိုးလို့ အဲ့နေရာတဝိုက် ဓာတ်ကြိုးတွေတောင် သွယ်ခွင့်မရှိဘဲ မြေအောက်ကနေသွယ်ရတယ်တဲ့လေ။
(9) ကမ္ဘာပေါ်မှာလူမတက်ရသေးတဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ရှိတဲ့ နိုင်ငံ
Buhtan အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ် Gangkhar Puensum က ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၄၀ခုမြောက်အမြင့်ဆုံးတောင်ပါတဲ့။ ဒါပေမဲ့ ကမ္ဘာပေါ်မှာလူမတက်ရသေးတဲ့တောင်ထိပ်မှာ အမြင့်ဆုံးပါပဲ။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ဘူတန်တွေက အယူသည်းပြီး တောင်ပေါ်ပေးမတက်တာကြောင့်ပါ။ လူတွေတောင်ထိပ်ပေါ်တက်ရင် ရာသီဥတုပျက်မယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးမဖြစ်ထွန်းဘဲ အစာရေစာခေါင်းပါးမယ်ဆိုပြီး အယူရှိလို့ပေးမတက်တာပါတဲ့။
(10) ကမ္ဘာ့ဆင်းရအခက်ဆုံးလေဆိပ်ရှိတဲ့ နိုင်ငံ
ဘူတန်ကိုသွားချင်ရင် တိုက်ရိုက်သွားလို့ မရပါဘူး။ ဘန်ကောက်ကတဆင့် Butan Airlineနဲ့ သွားရပါတယ်။ ဘန်ကောက်ကနေ ဘူတန်အသွားလေယာဉ်မှာ ဘယ်ဘက်ထိုင်ခုံရအောင်တောင်းပါ။ ရာသီဥတုသာယာရင် လမ်းမှာ ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧဝရက်တောင်ကို လေယာဉ်ပေါ်က လှမ်းမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဘူတန်ရဲ့ တစ်ခုတည်းသော အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် Paro Airport က ကမ္ဘာ့ဆင်းရအခက်ဆုံးလေဆိပ်တွေထဲက တစ်ခုပါ။ တောင်တွေကို ဖြတ်ပြီး တောင်ကြားထဲက လေဆိပ်ကို ဆင်းရတာ ပညာသားပါပါတယ်။ Well Trained Pilot တွေသာဆင်းနိုင်တာပါ။ ဒါကြောင့်လည်း လေဆိပ်ကို ချောချောမွေ့မွေ့ဆိုက်ရောက်တဲ့အခါ လေယာဉ်စီးခရီးသည်တွေ လက်ခုပ်တီး ဂုဏ်ပြူကြတာကို တွေ့ခဲ့ရတာပါ။
(11) မီးပွိုင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံ
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မီးပွိုင့်မရှိတဲ့ နိုင်ငံကိုပြပါဆို ဘူတန်ကိုပဲပြရမှာပါ။ ဘူတန်မြို့တော် သင်ဖူးက ကမ္ဘာပေါ်မီးပွိုင့်မရှိတဲ့ မြို့တော်၂ခုထဲကတစ်မြို့ပါ။ နောက်တစ်မြို့ကတော့ မြောက်ကိုရီးယားမြို့တော် ပြုံးယမ်းပါတဲ့။ သင်ဖူးမြို့မှာ မီးပွိုင့်မရှိတော့ ကားအရမ်းရှုပ်တဲ့ လမ်းဆုံလမ်းခွတစ်ခုမှာတော့ ယဉ်ထိန်းရဲတစ်ယောက်ကို တာဝန်ချထားရပါတယ်တဲ့လေ။
(12) TV နဲ့ Internet နောက်အကျဆုံးသုံးတဲ့ နိုင်ငံ
ဘူတန်မှာအရင်တုန်းက TVနဲ့ အင်တာနက်တွေကို ပိတ်ပင်တားမြစ်ထားပြီး လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၉နှစ်ကျော် ၁၉၉၉ခုနှစ်မှာမှ TV တွေ Internet တွေ အသုံးပြုခွင့်ပေးလိုက်တာတဲ့လေ။
• အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံ – တရုတ်နဲ့ အိန္ဒိယ
• လူဦးရေ – ၇သိန်းကျော်
• မြို့တော် – သင်ဖူး
• ငွေကြေး – Nu နူ လို့ခေါ်ပါတယ်။ ၁ နူကိုမြန်မာငွေ ၂၂ကျပ်ကျပါတယ်။
• ရာသီဥတု – နွေဦး၊ နွေ၊ ဆောင်းဦး၊ ဆောင်း ဆိုပြီး ၄မျိုးရှိပါတယ်။ ကိုယ်တွေရောက်ခဲ့တဲ့ Spetember လကတော့ နွေအကုန် ဆောင်းဦးအကူး ကာလမို့လို့ အရမ်းမပူဘဲနေလို့ကောင်းပါတယ်။
• National Flower – တောင်ဇလပ်မျိုးနွယ်ဖြစ်ပြီး မေလလောက်ပွင့်လေ့ရှိပါတယ်။ Blue Poppy လို့ခေါ်တဲ့ ဘိန်းပန်းကိုလည်း National Flower အဖြစ်သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။
• National Animal – သားမင်းလို့ခေါ်တဲ့ နွားကိုယ်ဆိတ်ခေါင်းရှိပြီး ဒဏ္ဏာရီနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့အကောင်ပါ။ အဲ့လိုအကောင်က ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၄နိုင်ငံပဲရှိတာတဲ့။ မြန်မာ၊ နီပေါ၊ တရုတ်၊ ဘူတန်မှာပဲ တွေ့ရတာတဲ့လေ။
• National Bird – တောကျီးကန်းပါ။ ဘုရင်တွေဆောင်းတဲ့ ဥသျှောင်ထိပ်မှာတွေ့ရတဲ့ အကောင်ပါ။
• National Tree – Cyprus အပင်
အုပ်ချုပ်ရေးကတော့ Democracy & Constitutional Monarchy စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာလွှတ်တော်ရှိပေမဲ့ ဘုရင်ကိုချစ်ကြောက်ရိုသေလို့ ဘုရင်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အတည်ယူပါတယ်။
ကာကွယ်ရေးပိုင်းအနေနဲ့ စစ်တပ်က ကိုယ်ပိုင်စစ်တပ်ရှိပေမဲ့ အိန္ဒိယကစစ်တပ်ကို အဓိကအားထားပါတယ်။ ကာကွယ်ရေးသာမက စီးပွားရေးမိတ်ဖက်အနေနဲ့ India ကို တည့်အောင်ပေါင်းထားပါတယ်။ အိန္ဒိယကို Hydro Power ရေအားလျှပ်စစ်ပြန်ရောင်းပေးပါတယ်။ တိဘက်ကို တရုတ်ကသိမ်းပြီးနောက် တရုတ်ကိုကြောက်သွားတာကြောင့် India နဲ့ မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတာပါတဲ့လေ။
နိုင်ငံရဲ့ အဓိကစီးပွားရေးက Tourism ပါ။ ရေစီးသန်တဲ့မြစ်တွေရှိလို့ ရေအားလျှပ်စစ်ရောင်းပြီးလည်း ဝင်ငွေရပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့ 60%က တောယာတွေမို့လို့ စိုက်ပျိုးရေးလည်း ဖြစ်ထွန်းပါတယ်။
ကိုယ်တွေလိုမျိုး ထမင်းနဲ့ဟင်းစားပါတယ်။ သူတို့အစားအစာတွေက တရုတ်စာတွေနဲ့ဆင်ပေမဲ့ အသားအစားနည်းပါတယ်။ နိုင်ငံထဲမှာ အသားသတ်လို့မရတော့ အသားကို India နဲ့ Nepal ကနေ တင်သွင်းလေ့ရှိကြတယ်တဲ့လေ။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်က ရေခံမြေခံကောင်းတော့အရမ်း လတ်ဆတ်ပါတယ်။ ချိစ်လည်း အစားများတယ်။ Yakလို့ခေါ်တဲ့ တိဘက်နွားနို့ကနေရတဲ့ ချိစ်ကို စားကြတယ်။
အကြိုက်ဆုံးကတော့ ဟီမာတာချီ လို့ခေါ်တဲ့ ငရုတ်သီး-ချိစ်ချက်ပါ။ ငရုတ်သီး ငပိချက်ဟုတ်ဘူး။ ချိစ်ချက်။ ငရုတ်သီးအတောင့်အစိမ်းကို ခွဲပြီး ချိစ်နဲ့ရောချက်စားတာ အီအီစပ်စပ်လေးနဲ့ကောင်းမှကောင်း။
ဘူတန်မှာ ကွမ်းလည်း စားကြတယ်။ ကွမ်းကိုဆေးတွေမထည့်ဘဲ ကွမ်းရွက်နဲ့ ကွမ်းသီးပဲစားကြတာပါ။ ဘူနန်ကွမ်းကို Dolma လို့ခေါ်ပါတယ်။
Dzongkha လို့ခေါ်တဲ့ ဘာသာစကားသုံးလေ့ရှိပြီး တခါတလေ နီပေါစကားပြောတတ်ကြပါတယ်။ အတော်များများက English လိုလည်း ပြောတတ်ကြတာကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အသုံးဝင်မယ့် စကားစုတွေကတော့
• မင်္ဂလာပါ – ဂူဇူဇမ်ဘိုလာ
• ကျေးဇူးတင်ပါတယ် – ကတ်သရင်းချေလာ
• နှုတ်ဆက်တဲ့အခါ – ကံကောင်းပါစေ – တာချီတလဲ
ဘူတန်က ဟိမဝန္တာတောင်ကြောတွေပေါ်တည်ထားတဲ့ နိုင်ငံဆိုတော့ မြို့လေးတွေကလည်း အေးချမ်းလှပါတယ်။ တောင်ကြားထဲ စီးဆင်းနေတဲ့ မြစ်တလျှောက် လမ်းဖောက်ထားတဲ့ ကားလမ်းအတိုင်း တစ်မြို့နဲ့ တစ်မြို့ကို ကားနဲ့သွားရပါတယ်။ ကားမူးတတ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ Novomin တို့လို အမူးအမော်ပျောက်ဆေးတွေ ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်။
မြို့တွေမှာတော့ ဖူးမြော်စရာ စေတီတွေ၊ ဘုရားကျောင်းတွေ၊ ဗိမာန်တော်တွေရှိကြတယ်။ ဘူတန်ကို အဓိကသွားတာကတော့ ရှုမြော်ခင်းတွေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Unique Culture ကြောင့်ပါ။ ဘူတန်ရောက်ခဲ့တဲ့ ၄ရက်အတွင်း မြို့၃မြို့ရောက်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီ ၃မြို့နဲ့ လည်ပတ်စရာနေရာတွေကတော့….
ဘူတန်မှာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်ရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသောမြို့ပါ။ ဘူတန်ကိုလာချင်ရင် ဒီမြို့ကိုအရင်ဆုံးရောက်ပါလိမ့်မယ်။ ဘူတန်ရဲ့ အထင်ကရ Tiger Nest ကျားသိုက်ကျောင်းတော်ကြီးရှိတဲ့ မြို့ဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ Tiger Nest က ကျောက်တောင်ကြီးရဲ့ ကမ်းပါးမှာ ၁၆ရာစုခန့်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဘုန်းကြီးကျောင်းပါ။ ဘုန်းကြီးကျောင်းရောက်ဖို့ တောင်တက်လမ်းအတိုင်း ၄-၅နာရီလောက်ကြာ အတက်အဆင်းလုပ်ရတာဆိုတော့ ခြေထောက်မကောင်းတဲ့ လူကြီးတွေအနေနဲ့တော့ သွားဖို့ မသင့်တော်ပါဘူး။ မသွားနိုင်ရင် အဲ့ဒီအစားမြို့ထဲက အထင်ကရနေရာတွေကို လိုက်ပို့ပေးပါတယ်။ မြင်းနဲ့လမ်းရဲ့ ၃ပုံတစ်ပုံလောက်တော့တက်လို့ရပေမဲ့ ကျန်တာက လမ်းလျှောက်တက်ရပါတယ်။ မြင်းနဲ့ဆင်းလို့လည်းမရပါဘူး အတက်ပဲရတာပါ။
သင်ဖူးကတော့ လက်ရှိမြို့တော်ဖြစ်ပြီး နွေရာသီမြို့တော်လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ရာသီဥတုက အေးစိမ့်စိမ့်လေးရှိတာကြောင့်ပါ။ သင်ဖူးမှာ ဘူတန်ဘုရင်နန်းတော်နဲ့ သင်ဖူးဗိမာန်တော်၊ အောက်မေ့ဖွယ်စေတီ၊ Changnakha ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ အကြီးဆုံး ထိုင်တော်မူကြေးသွန်းဘုရား၊ သားမင်းတွေမွေးမြူထားတဲ့ ဥယျာဉ်တွေဆီ သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
ဘူတန်မှာပွဲတော်တွေကို နိုင်ငံအနှံ့ လစဉ်ကျင်းပတာ သင်ဖူးမြို့တော်မှာ ကျင်းပတဲ့ သင်ဖူပွဲတော်ကတော့ အကြီးကျယ်အခမ်းနားဆုံးပေါ့။ မြို့တော်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲဆိုတော့ တချို့နှစ်တွေမှာ ဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကြွလာပြီး အားပေးလို့ ကံကောင်းရင် ဘုရင်ကိုတောင် တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်တွေသွားတဲ့အချိန်နဲ့ ကြုံလို့ သင်ဖူးပွဲတော်တက်ရောက်ခဲ့သေးတယ်။ တကယ့်ကို ဒဏ္ဏာရီထဲ ရောက်သွားသလိုပါပဲ။ မြို့နေလူတွေရော အနီးအနားရွာကလူတွေပါ ပွဲတော်ကို ရိုးရာဝတ်စုံကိုယ်စီနဲ့ ဝတ်ကောင်းစားလှတွေ ဝတ်ပြီး လာတက်ကြတာ ဘူတန်အကယ်ဒမီပေးပွဲရောက်နေသလိုပဲ။ မြင်မြင်သမျှလှနေကြတာ။ ပွဲတော်မှာ တစ်နေကုန် အကအလှတွေနဲ့ ဖျော်ဖြေတော့ ပွဲတော်လာတဲ့ ပရိသတ်တွေလည်း ဝင်လာမစဲ တသဲသဲရယ်ပေါ့။ ဘူတန်သွားမယ်ဆိုရင် ပွဲတော်ရက်နဲ့ တိုက်သွားဖို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ တကယ့်ကို ဆန်းသစ်တဲ့ အတွေ့အကြုံကို ခံစားရမှာပါ။
ပူနားခါးမြို့ကတော့ ၁၉၅၅ခုနှစ်အထိ မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မြို့လေးဖြစ်ပြီး အခုချိန်မှာတော့ ဆောင်းရာသီမြို့တော်လို့ တင်စားထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဆောင်းရာသီတခြားနေရာမှာအေးနေတဲ့အခါ ဒီမှာနွေးနေတတ်တာကြောင့်ပါ။
ဖိုချူးနဲ့ မိုချူး အဖေမြစ်နဲ့ အမေမြစ်ဆုံရာ နေရာမှာ ရှိတဲ့ ပူနားခါးက ဂျုံ (Dzhong)လို့ခေါ်တဲ့ ကျက်သရေဆောင်ဗိမာန်တော်ကြီးကတော့ လှလွန်းလို့ ပို့စကတ်တွေမှာ ခဏခဏမြင်ရတဲ့ အဆောက်အအုံပါ။ ဘုရင်မင်းဆက် အဆက်ဆက်က Cronation နန်းတက်ပွဲ၊ လက်ထပ်ထိမ်းမြားပွဲတွေကျင်းပရာနေရာဖြစ်သလို သာသနာ့ နာယကကျောင်းထိုင်ရာ ကျောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအဆောက်အအုံ၊ ခံတပ်၊ နန်းတော်အနေနဲ့ အသုံးပြုခဲ့ကြတဲ့နေရာပါ။ သူတို့လူမျိုးတွေအနေနဲ့ ဂျုံထဲဝင်ရောက်တဲ့အခါ အရိုအသေပေးတဲ့အနေနဲ့ ရိုးရာဝတ်စုံပေါ် အဖြူရောင်ပုဝါကိုပတ်ပြီးဝင်ကြတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ပူနားခါးမြို့နားမှာ သားသမီးရအောင် ဆုပန်တဲ့ နတ်ကွန်းတစ်ခုရှိတယ်။ အဲ့နတ်ကွန်းရှိတဲ့ ရွာလေးကလည်း အရမ်းထူးဆန်းတာပဲ။ ရိုးရာအိမ်တွေရဲ့ နံရံတွေမှာ အမျိုးသားလိင်အင်္ဂါပုံကို ကာတွန်းပုံ၊ ပန်းချီပုံ အရောင်စုံဆွဲပြီး အလှဆင်ထားကြတာ။ သားသမီးရဖို့ အဆောင်အယောင်လို့ သဘောထားပြီး အလှဆင်ထားတာတဲ့။ ပုံတူရုပ်တု လေးတွေတောင် Size စုံ၊ အရောင်စုံ ရောင်းလို့ အမှတ်တရ ဝယ်သွားလို့ရတယ်နော့။
ပါရိုကနေ ပူနားခါး အသွားလမ်းမှာရှိတဲ့ တောင်ပေါ်မှာတည်ထားတဲ့ ဘူတန်ရိုးရာ လေးထောင့် စေတီ ၁၀၈ဆူပါ။ တတိယဘုရင်က ဆေးလိပ်အရမ်းသောက်လို့ အဆုတ်ကင်ဆာရောဂါဝေဒနာခံစားရတဲ့အခါမှာ ဘုရင်ကြီးကျန်းမာရေးအတွက်ရည်စူးပြီး စေတီတွေတည်ထားခဲ့ကြတာပါ။ ဘုရင်ကြီးဆုံးပြီးနောက် သားတော် စတုတ္ထဘုရင်လက်ထက်မှာ ဆေးလိပ်ကို စိတ်နာလို့ ဆေးလိပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိတ်ပင်တားမြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့လေ။ ဒီတောင်ပေါ်ဘုရားနားက စားသောက်ဆိုင်က ရှုခင်းတွေလှသလို စားလို့လည်း သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ရာသီဥတုသာယာတဲ့အခါ ဒီတောင်ပေါ်ကနေ ဘူတန်ရဲ့ အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်အပါအဝင် နှင်းတွေဖုံးနေတဲ့ တခြားတောင်ထိပ်တွေကိုပါ လှမ်းမြင်ရပါတယ်။
ဒါကတော့ စက်တင်ဘာလတုန်းက သွားရောက်ခဲ့တဲ့ ဘူတန်ခရီးစဉ်မှာတွေ့ခဲ့ ကြုံခဲ့ရတာလေးတွေရယ်၊ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာလေးတွေရယ်ကို ပြန်ပြောပြထားတာပါ။ ပုံလေးတွေမှာလည်း ရှင်းပြထားလို့ ဝင်ကြည့်ကြပါနော်။ နုမြတ်တို့ မိသားစုကတော့ ဒီတစ်ခေါက်ဘူတန်ခရီးကို ဘူတန်ခရီးစဉ်တွေ စီစဉ်လေ့ရှိတဲ့ Mighty Days နဲ့သွားခဲ့တာပါ။ နောက်ထပ်လည်း ခရီးစဉ်တွေ ထွက်ဖို့ရှိတော့ စိတ်ဝင်စားရင် Mighty Days မှာ စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်နော်။
August 20, 2019 April 20, 2021 Posted in Canada, Travel, UncategorizedTagged Canada, ski, snow, Travel1 Comment
ကနေဒါနိုင်ငံဆိုတာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဒုတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်သလို အချိန် ၆မျိုးရှိတဲ့နိုင်ငံ၊ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်တဲ့နိုင်ငံ၊ စိမ်းပြာရောင် ရေကန်ကြီးတွေအပါအဝင် ရေကန်ပေါင်း၂သန်းရှိတဲ့နိုင်ငံ၊ဧရာမဥယျာဉ်ကြီးတွေရှိတဲ့နိုင်ငံ၊ လေထုသန့်ရှင်းတဲ့နိုင်ငံ၊ ရောကီးတောင်တန်းတွေရှိတဲ့နိုင်ငံ၊ Maple ပင်တွေ အများကြီးရှိတဲ့ နိုင်ငံ တစ်ခုလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နုမြတ်တို့ ကနေဒါကို ဒီ ဧပြီတုန်းက၂ပတ်တာ သွားရောက်လည်ပတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ကနေဒါက ထင်ထားတာထက်ပိုလှ ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာကိုလည်း တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ကနေဒါက ဘယ်လိုတွေ ထူးခြားမှုရှိနေလဲဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ကြပါနော်။
ကနေဒါနိုင်ငံဟာ ရုရှားနိုင်ငံပြီးရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးဆုံးနိုင်ငံကြီးပါ။ တတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံကတော့ တရုတ်နိုင်ငံပါ။ ကနေဒါနိုင်ငံကြီးက ဘယ်လောက်တောင်ကျယ်လဲဆိုရင် စတုရန်းကီလိုမီတာပေါင်း ၉.၉၈သန်း (စတုရန်းမိုင်၃.၈၅သန်း) နီးပါးကျယ်ဝန်းပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ၁၅ဆလောက်ကိုကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံကတော့ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ၃၉နိုင်ငံမြောက်အကြီးဆုံးနိုင်ငံပါတဲ့။
⏰အချိန် ၆မျိုးရှိတဲ့ နိုင်ငံ
ဧရိယာ ကျယ်လွန်းအားကြီးလွန်းလို့ တစ်နိုင်ငံထဲမှာတင် Time Zone ၆ခုတောင် ရှိနေပါတယ်။ တစ်နယ်နဲ့ တစ်နယ် အချိန်တွေ မတူကြပါဘူး။ အနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ Vancouver မြို့နဲ့ အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ St.John’s မြို့ဆို အချိန် လေးနာရီခွဲတောင်ကွာပါတယ်။ Time Zone အကြောင်းပြောရမယ်ဆိုရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ Time Zone အများဆုံးနိုင်ငံက ပြင်သစ်ပါတဲ့။ နိုင်ငံ သိပ်မကြီးပေမဲ့ နေရာအနှံ့က ကျွန်းတွေကို ပိုင်ထားတော့ Time Zone 13 ခုတောင်ရှိတာတဲ့လေ။ အကြီးဆုံးနိုင်ငံ Russia နဲ့ စတုတ္ထအကြီးဆုံးနိုင်ငံ USA ကတော့ Time Zone ၁၁ခုရှိတယ်။ တတိယအကြီးဆုံးနိုင်ငံ တရုတ်ကတော့ ထူးထူးခြားခြား Time Zone တစ်ခုပဲ သတ်မှတ်တယ်တဲ့။ ဧရိယာဘယ်လောက်ပဲကျယ်ကျယ် စံတော်ချိန်တစ်ခုထဲ သတ်မှတ်ထားတာပါ။
ကနေဒါနိုင်ငံမှာ ကမ္ဘာ့စံချိန်တင်တဲ့အရာတွေလည်း များစွာရှိလို့နေပါတယ်။
ကမ္ဘာပေါ်မှာအရှည်ဆုံးလမ်းဟာ ကနေဒါနိုင်ငံ Ontarioပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ Yonge လမ်းဖြစ်ပြီး မိုင်ပေါင်း၁၀၀၀ကျော် ရှည်လျားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့အရှည်ဆုံး ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းလည်း ရှိလို့နေပါတယ်။ ကမ်းရိုးတန်းအရှည်က မိုင်ပေါင်း ၁သိန်းခွဲကျော်ထိရှိပြီး အတ္တလန္တိတ်၊ အာတိတ်နဲ့ ပစိဖစ်သမုဒ္ဒရာ ၃ခုနဲ့တောင် ထိစပ်နေတာပါတဲ့။
ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးကျွန်း ၁၀ခုအနက် ၃ခုကိုလည်း ကနေဒါနိုင်ငံက ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ အကြီးဆုံးကျွန်းဆိုရင် Great Britain ထက် ၂ဆလောက်ကြီးပြီး နောက်၂ကျွန်းဆို အင်္ဂလန်နိုင်ငံ အရွယ် အစားလောက်ထိ ရှိပါတယ်။
သဘာဝအလှတွေပေါကြွယ်ဝတဲ့ ကနေဒါဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ သဘာဝရေကန် အများဆုံးလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ သဘာဝရေကန်ပမာဏရဲ့ တစ်ဝက်ကျော်က ကနေဒါမှာရှိပါတယ်။ တစ်နိုင်ငံလုံးမှာရေကန်ပေါင်း ၂သန်းနီးပါး ရှိပြီး အွန်တာရီယိုပြည်နယ်တစ်ခုထဲမှာတင် ရေကန်ပေါင်း ၂သိန်းခွဲရှိကာ ကမ္ဘာ့ရေချိုပေါင်းရဲ့ ၃ပုံတစ်ပုံကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတဲ့လေ။ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးရေကန်ကြီးတွေထဲက ရေကန်၂ခုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ တောတောင်တွေ ဝန်းရံထားပြီး ကြည်လင်လွန်းလှတဲ့ စိမ်းပြာရောင်ရေကန်ကြီးတွေက ကမ္ဘာကျော်ပါတယ်။
သဘာဝရှုခင်းတွေအရမ်းလှတဲ့ ကနေဒါမှာ ကမ္ဘာကျော်ရုပ်ရှင်တွေအများကြီး လည်းလာရိုက်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ကမ္ဘာ့သစ်တောတွေရဲ့ ၂၀ရာခိုင်နှုန်းက ကနေဒါနိုင်ငံမှာရှိတာပါ။ သစ်တောအကျယ်အဝန်းပေါင်း ၃၉၆.၉သန်း ဟက်တာရှိတဲ့ ကနေဒါရဲ့ အမျိုးသားဥယျာဉ်ကြီးတွေဟာ နိုင်ငံအတော်များများထက်တောင် ပိုကြီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။
သစ်တောတွေ သစ်ပင်တွေ အများကြီးရှိလို့လည်း ကနေဒါမှာ လေကောင်းလေသန့်ရှူရှိုက်နိုင်ပြီး ကမ္ဘာပေါ် စတုတ္ထမြောက်လေထုအသန့်စင်ဆုံးနိုင်ငံအဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရတာပါ။
ကနေဒါရဲ့ ရာသီဥတုကလည်း အမြဲလိုလိုအေးနေတတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့မိသားစုအလည်အပတ်သွားခဲ့တဲ့ နွေဦးအစ ဧပြီလထဲမှာတောင် အတော်အေးတာကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။ တောင်ထိပ်မှာ နှင်းတွေ အမြဲမပြတ်ဖုံးနေတဲ့ ရော့(ခ်)ကီးတောင်တန်းတွေရှိလို့ နှင်းလျှောစီးတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်လည်း နာမည်ကြီးပါတယ်။
ကနေဒါအလံကိုမြင်ဖူးကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ထူးထူးခြားခြားသစ်ရွက်ပုံပါတဲ့အလံလေးပေါ့။ အဖြူရောင်အောက်ခံမှာ အနီရောင် မေပယ်လ်ရွက်လေးထင်းနေတာ။ Maple ပင်တွေကို ကနေဒါက သိပ်တန်ဖိုးထားတာ။ နိုင်ငံရဲ့ National Tree အဖြစ်လည်း သတ်မှတ်ထားကြတယ်။ ကနေဒါမေပယ်လ်ပင်ကရတဲ့ သကြားရည် Maple syrup ဆိုလည်း အရသာအရမ်းရှိလို့နာမည်သိပ်ကြီးပါတယ်။
ကနေဒါနိုင်ငံမှာ လူဦးရေက စုစုပေါင်း ၃၆သန်းကျော် ရှိပြီး ၁.၄သန်းကပဲ ဒေသခံလူမျိုးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ လူဦးရေရဲ့ ၉၀ရာခိုင်နှုန်းနီးပါးက အမေရိကန်နဲ့ ကနေဒါ နယ်စပ်နားဝန်းကျင်မှာနေကြပါတယ်။ လည်ပတ်ရတဲ့ မြို့အတော်များများကလည်း နယ်စပ်နားမှာ ရှိတာများပါတယ်။ နုမြတ်တို့ ကနေဒါသွားလည်တုန်းက Tourist Attraction တွေရှိတဲ့ West Coast ရော East Coast ရော လည်ဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ ကနေဒါခရီးစဉ် စုစုပေါင်း ၁၄ရက်အတွင်းမှာ မြို့ပေါင်း ၁၂မြို့လောက် ရောက်သွားခဲ့တယ်။ အဲ့ထဲကမှ လည်စရာကောင်းတဲ့ မြို့ ၁၀မြို့ အကြောင်း ပြောပြချင်ပါတယ်။
🌇East Coast (၅)မြို့
ကနေဒါရဲ့ အကြီးဆုံးမြို့ကတော့ တော်ရန်တိုမြို့ (Toronto)ပါ။ အမေရိကန်နိုင်ငံနဲ့ နယ်စပ်မှာရှိနေပြီး ကနေဒါနိုင်ငံနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ၂ခုကြားမှာ နိုင်အာဂရာရေတံခွန်ကြီး (Niagara Falls) ခြားထားပါတယ်။ ဒီရေတံခွန်ကြီးက အရမ်းကြီးပြီးလှလွန်းလို့ ကမ္ဘာကျော်လှပါတယ်။ အမေရိကန်ရောက်တုန်းက အမေရိကန်ဘက်အခြမ်းကနေ ရေတံခွန်ကြီးကို သွားကြည့်ခဲ့သေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကနေဒါဘက်ကနေ မြင်ရတာပိုလှပါတယ်။ ရေတံခွန်ကြီးတစ်ခုလုံးကို အပေါ်စီးက မြင်ရအောင် Tower ပါဆောက်ပေးထားတော့ အရမ်းမိုက်ပေါ့။ ရေတံခွန်တစ်ဖက်ခြမ်းက အမေရိကန်နိုင်ငံကို ကနေဒါကနေ လှမ်းမြင်နေရတယ်။ တံတားနဲ့ဖြတ်ကူးလိုက်ရုံပဲ။ နီးနီးလေးပါ။
ပြီးတော့တစ်ချိန်တုန်းက ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး Tower ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ CN Tower လည်း Toronto မြို့မှာရှိတယ်။ သူက ခုချိန်မှာတော့ Tower ထဲမှာ တတိယအမြင့်ဆုံး Tower ပေါ့။ ပေ ၁၈၀၀ ကျော် အမြင့်ရှိတဲ့ အထပ်ရဲ့ အပြင်ဘက် အစွန်းကနေ လျှောက်ရတဲ့ Edge Walk ဆိုတာ ရင်တထိပ်ထိပ်နဲ့ အကြမ်းစားကြီးသိလား။
ကနေဒါရဲ့ ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ မွန်ထရီယယ် (Montreal) မြို့က ပြင်သစ်နိုင်ငံက ပဲရစ်မြို့ပြီးရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြင်သစ်စကားပြောလူဦးရေအများဆုံးမြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူက ပြင်သစ်ကိုလိုနီလက်အောက်ခံဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုတော့ တော်တော်များများက ပြင်သစ်လိုပြောတတ်ကြတာပါ။
(3) Quebec City
Canada အရှေ့ပိုင်းမြို့လေး ကွေးဘက်စီးတီး (Quebec City )ကလည်း ပြင်သစ်မြို့လေးလိုပဲ။ အိမ်လေးတွေ လမ်းလေးတွေကတကယ် ဥရောပစတိုင်။ ပြင်သစ်လက်အောက်ခံ နယ်မြေဖြစ်ခဲ့ဖူးတော့ အဲ့ကလူတွေအကုန်လုံးလိုလို ပြင်သစ်လိုပြောတတ်တယ်တဲ့။ အဲ့မြို့လေးက မြောက်အမေရိကတိုက်မှာ မြို့ရိုးရှိခဲ့ဖူးတဲ့ တစ်ခုတည်းသောရှေးဟောင်းမြို့ဖြစ်ပြီး UNESCO World Heritage site အဖြစ် သတ်မှတ်ခံထားရပါတယ်။
ပြီးတော့Korea Drama ကား Goblin ဇာတ်ကားလေး လာရိုက်ခဲ့တဲ့မြို့လေးဆိုတော့ Goblin ထွက်လာတဲ့ တံခါးနီနီလေးကိုလည်း မရမကရှာပြီးရိုက်ခဲ့သေးတယ်လေ။
ကနေဒါနိုင်ငံရဲ့ မြို့တော်နဲ့ အစိုးရရုံးထိုင်ရာမြို့ကတော့ အော်တဝါ (Ottawa) မြို့ပါ။ ဒီက နေပြည်တော်လိုပေါ့။ အဲ့ရောက်လို့ရှိရင် ဗိသုကာလက်ရာမြောက်တဲ့ အစိုးရရုံးတွေ ပါလီမန်အဆောက်အအုံတွေကို လေ့လာခဲ့ဦးပေါ့။
ကနေဒါအရှေ့တောင်ပိုင်းက ဆိပ်ကမ်းမြို့လေး ကင်စတန် (Kingston) ကတော့ သာယာအေးချမ်းလွန်းလို့ သက်ကြီးရွယ်အိုပင်စင်စားတွေ အေးအေးဆေးဆေးအခြေချ နေထိုင်ကျတဲ့မြို့လေးပါတဲ့။
🌃West Coast (5)မြို့
ကနေဒါအနောက်ဘက် ကမ်းခြေမြို့ ဗန်ကူးဗား(Vancouver )ကတော့ ပင်လယ်တွေ၊ နှင်းတောင်တွေ ဝန်းရံထားလို့ လှပတဲ့ရှုခင်းတွေကြောင့် ကျော်ကြားတဲ့ မြို့ကြီးတစ်မြို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Vancouver မြို့လေးက သိပ်သာယာတာပဲ။ နှင်းဖုံးနေတဲ့ ရေခဲတောင်လေးတွေကိုတောင် မြို့ထဲလမ်းတွေကနေ လှမ်းမြင်ရတယ်။ သမုဒ္ဒရာထဲရေဆင်းကူးမလား၊ နှင်းတောင်ပေါ်မှာ နှင်းလျှောစီးမလား၊ ပန်းခြံထဲလမ်းလျှောက်မလား။ ဒါတွေအားလုံးကို တစ်နေ့ထဲအပြီးလုပ်လို့ရတဲ့ မြို့လေးပေါ့။ ဒါကြောင့်လည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေပျော်စရာအကောင်းဆုံးမြို့လို့ သတ်မှတ်ခံထားရတာနေမယ်။
Vacouver တစ်မြို့လုံးကို လှမ်းမြင်ရတဲ့ Stanley Park ကလည်း ရေလည်သာယာတယ်နော်။ ရာသီဥတုအေးစိမ့်စိမ့်လေးမှာ ကောင်းကင်ပြာပြာကြီးရယ် တိုက်အမြင့်ကြီးတွေ ထိုးထောင်နေတဲ့မြို့ရှုခင်းရယ် နောက်ခံထားပြီး ပင်လယ်ကမ်းစပ်တလျှောက် လမ်းလျှောက်ကြသူတွေ၊ ပြေးကြသူတွေ၊ စက်ဘီးစီးကြသူတွေ အများကြီးပဲ။ အဲ့မှာသာဆို ကိုယ်လည်း နေ့တိုင်းစက်ဘီးတွေ စီးဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ သာယာလွန်းလို့ သိပ်သဘောကျတာပဲ။
မြို့ထဲကနေ နာရီဝက်လောက်မောင်းရတဲ့ Capilano ကြိုးတံတားပေါ် သည်းထိပ်ရင်ဖိုဖြတ်ချင်လည်းရတယ်။ ကြိုးတံတားကအမြင့်ကြီးပဲ။ အောက်မှာ ချောက်ကြီးအနက်ကြီး။ စမ်းချောင်းလေးကလည်း တသွင်သွင်စီးနေတာ။ ချောက်ကမ်းပါးနံရံကြီးတွေနားကနေဖြတ်လျှောက်ရတဲ့ Cliff Walk လည်း လုပ်ခဲ့သေးတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေကိုဆက်ထားတဲ့ ကြိုးတံတားလည်း လျှောက်ခဲ့သေးတယ်။
Vancouver International လေဆိပ်နားက Richmondမြို့မှာ ရှိတဲ့ Factory Outlet မှာလည်း Shopping ထွက်လို့ရသေးတယ်။ Coach, MK, Kate Spade, Nike စတဲ့ ကမ္ဘာကျော် Brand တွေကို တော်တော် သက်သာတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့နေရာပေါ့။
ကနေဒါနောက်ပိုင်းရဲ့ ရှေးအကျဆုံးမြို့ဟောင်း ဗစ်တိုးရီးယား (Victoria) မြို့ကို ဗန်ကူဗါးကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရတယ်။ ဗန်ကူးဗါးကနေ Victoria မြို့ကို ဘယ်လိုသွားခဲ့လည်းသိလား။ ပင်လယ်ကူးဇက်ကြီးနဲ့ပေါ့။ ဇက်ဆိုလို့ အထင်မသေးနဲ့ဆရာရေ။ Cruise လိုတောင်ထင်ရတယ် မိုက်မှမိုက်။ BC Ferry ဇက်သင်္ဘောကြီးက ၆ထပ်တောင်ရှိတာ။
အဲ့မှာမလည်မဖြစ်ကတော့ Hatley ရဲတိုက်ကြီးပေါ့။ လှလွန်းလို့ Batman ကား X Man ကားနဲ့ Hollywood ဇာတ်ကားအတော်များများ လာရိုက်ခဲ့တာတဲ့လေ။ အရင်က Sir တွေနေခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုတော့ University တစ်ခုကို လှူထားပါတယ်တဲ့။ ရဲတိုက်ကြီးရယ် မြက်ခင်းပြင်ကြီးရယ် ချယ်ရီပင်လေးရယ် ရေကန်ကျယ်ကြီးရယ် ရာသီဥတုအေးအေးလေးရယ် နေခြည်နွေးနွေးလေးရယ်နဲ့ ညနေခင်းလေးက တကယ်ကို Perfect ပါပဲ။
Vancouver ကနေ ၂နာရီလောက်မောင်းရင် ရောက်တဲ့ ဝှစ်စလာ (Whistler) မြို့လေးမှာ ပေ၆၀၀၀ မြင့်တဲ့ Blackcomb ရေခဲတောင်ရှိတယ်။ ၂၀၁၀ခုနှစ်တုန်းက Winter Olympic ကျင်းပခဲ့တဲ့ရေခဲတောင်တဲ့လေ။ တောင်ခြေကနေ တောင်ပေါ်ကို မိနစ်၂၀လောက် Gondola Ride နဲ့ တက်ရတယ်။ တောင်ခြေမှာကတည်းက Temperature က2ံC ဖြစ်နေပါပြီ။ ရေခဲတောင်ဆိုတော့ Ski စီးတဲ့သူတွေလည်း အများကြီးပါပဲ။
ဗန်ကူးဗားကနေ Banff မြို့သွားတဲ့ လမ်းမှာရှိတဲ့ ကီလိုးနားမြို့(Kelowna) Okanagan ရေအိုင်ကြီးကလည်း ထူးဆန်းတဲ့ရေသတ္တဝါကြီးတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပြီး နာမည်ကြီးပါတယ်။ Ogopogo လို့အမည်ပေးထားတဲ့ ဧရာမရေသတ္တဝါကြီးရုပ်တုကို ရေအိုင်စပ်မှာ ထုဆစ်ထားတာကိုလည်းတွေ့ရမှာပါ။ မြို့မှာရှိတဲ့ ဝိုင်ပြခန်းသွားပြီး ကနေဒါဝိုင်ကိုလည်း သွားရောက်မြည်းစမ်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။
နှင်းတောင်တွေ ဝန်းရံနေတဲ့ ကနေဒါနောက်ပိုင်း ဘန့်ဖ် (Banff) မြို့လေးကတော့ အနီးအနားမှာရှိတဲ့ စိမ်းပြာရောင်ရေကန်တွေနဲ့ တောင်တွေကြောင့် သဘာဝနှစ်သက်သူ၊ စွန့်စားခရီးသွားတွေ အလာများတဲ့မြို့လေးပေါ့။ အဲ့မြို့လေးမှာ Hot Spring စိမ်ခဲ့သေးတယ်။ 0•C အေးစက်နေတဲ့ရာသီဥတုမှာ ရေခဲတောင်ကိုကြည့်ပြီး ၄၀ဒီဂရီ စင်တီဂရိတ်ရှိတဲ့ ရေပူစမ်းထဲက ရေနွေးနွေးလေးစိမ်ရတာ အရမ်းကိုနေလို့ကောင်းတာပါပဲ။
Canada နိုင်ငံရဲ့နာမည်ကျော် Lake Louise ကန်ဘေးက Fairmont Hotel ကလည်း ရေကန်ကြီးရယ် ရေခဲတောင်တွေရယ်လှမ်းမြင်ရတဲ့ ဒဏ္ဏာရီဆန်တဲ့ ရှုခင်းတွေကြောင့် ကျော်ကြားလှပါတယ်။ Lake Louise ရေကန်ကြီးက ရေလေးတွေစိမ်းပြာလဲ့နေလို့ နာမည်ကြီးတဲ့ ရေကန်ကြီးပေါ့။ ကိုယ်တွေရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ ရေတွေခဲပြီး ရေခဲပြင်ကြီးဖြစ်လို့နေပါတယ်။ ရေခဲတွေ၊ နှင်းတွေပေါ် လျှောက်သွားခဲ့တာ ရေကန်အလယ်လောက်ထိတောင်ရောက်သွားပါတယ်။
Lake Louise Ski Resort ရေခဲတောင်ပေါ်က နှင်းလျှောစီးစခန်းလည်းသွားခဲ့သေးတယ်။ ရေကန်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ရပြီး တောင်ပေါ်မှာ နှင်းလျှောစီးသမားတွေနဲ့ ပြည့်နေတာ။ ကိုယ်တွေကတော့ ဓာတ်ပုံရိုက်သမားတွေပေါ့။ 😀
Banff အကြောင်းကို ပို့စ်သက်သက်ရေးပေးထားသေးတယ်။ ဒီမှာ ဝင်ဖတ်ကြည့်ပါနော်။
ဒါကတော့ Lake Louise Ski Resort ရဲ့ ပုံတွေပါ။
ကနေဒါအစားအစာတွေက ထွေထွေထူးထူးတော့ သိပ်မရှိပါဘူး။ Maple ပင်တွေတန်ဖိုးထားတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်တော့ ပေါင်မုန့်တွေ Waffle တွေမှာ သုတ်စားတဲ့ သကြားရည်Maple Syrup ကို Souvenir အဖြစ်ရောင်းကြတယ်။ Maple Tea လဘက်ခြောက်တွေလည်း ဝယ်လာခဲ့သေးတယ်။ ဒေသစာအနေနဲ့ Poutine ဆိုတာ နာမည်ကြီးတယ်။ အာလူးချောင်းကြော်နဲ့ ချိစ်တွေကို အညိုရောင်အနှစ်စမ်းထားတာ။ အီတာတော့ အရမ်းအီတာပေါ့။ Salmonငါးပေါတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လို့ Smoked Salmon လည်းနာမည်ကြီးတယ်။ ကော်ဖီကြိုက်သူတွေ ကနေဒါရောက်ရင် မသောက်မဖြစ်ကတော့ Tim Hortons ကော်ဖီပေါ့။ ကနေဒါမှာ Starbucks ထက်ပိုနာမည်ကြီးတယ်။ ဆိုင်ခွဲတွေလည်း နေရာအနှံ့မှာရှိတယ်။
ကနေဒါမှာ Canadian Dollar သုံးပါတယ်။ မြန်မာငွေနဲ့တွက်ကြည့်ရင် 1$ကို ၁၀၀၀ကျော်ကျော်ပဲဆိုတော့ တွက်ရအရမ်းလွယ်ပါတယ်။
Canada မှာ အလှဆုံးကာလကတော့ မေလအစကနေ ဇွန်လကုန်ထိပါ။ နွေရာသီဖြစ်တဲ့ မေလနဲ့ဇွန်လမှာ ရေကန်က ရေတွေ အရေပျော်နေတာမို့လို့ စိမ်းပြာရောင်ရေကန်တွေနဲ့အရမ်းလှတဲ့ ရှုခင်းကို မြင်ရမှာပါ။ ဆောင်းဦးဖြစ်တဲ့ စက်တင်ဘာနဲ့ အောက်တိုဘာလမှာလည်း ရွက်ဝါတွေနဲ့ အပင်တွေက အရမ်းကိုလှပါတယ်တဲ့။ ကိုယ်တွေသွားခဲ့တဲ့ ဧပြီလကလည်း နေသာနဲ့နေရာသာ ရေခဲတဲ့နေရာခဲနဲ့ လည်ပတ်ရအဆင်ပြေပါတယ်။
ဒီဧပြီလတုန်းက သင်္ကြန်ပိတ်ရက်တွေမှာ သွားခဲ့တာပါ။ သုခလမ်းညွှန် ရဲ့ အစီအစဉ်နဲ့ ကနေဒါအနောက်ပိုင်းကိုလည်ပတ်ခဲ့ပြီး ကနေဒါအရှေ့ပိုင်းကိုတော့ ကိုယ့်အစီအစဉ်နဲ့ကိုယ် လည်ပတ်ခဲ့တာပါ။ ကုန်ကျစားရိတ်ကတော့ နည်းနည်းတော့များပါတယ်။ လေယာဉ်ခတင်ဈေးများနေတာဆိုတော့လေ။ Cathay Pacific လေကြောင်းလိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်ကနေ ဗန်ကူးဗားမြို့ကိုဟောင်ကောင်ကနေတဆင့်ခံပြီးသွားခဲ့ကြတာပါ။ Package Tour က ကနေဒါအနောက်ပိုင်း ၁၀ညအိပ်-၁၁ရက်ခရီးကို တစ်ယောက်ကို စားရိတ်ငြိမ်း US$ 4700 ကျပါတယ်။ အရှေပိုင်း ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လည်ပတ်တာတွေနဲ့ ပေါင်းရင်တော့ တစ်ယောက်ကို US$ 6000 နီးပါး (မြန်မာငွေသိန်း၇၀ကျော်) ကုန်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့က လေယာဉ်ခဈေးများတာရယ် လေယာဉ်အကြာကြီးစီးရတာရယ်နဲ့ ကာမိအောင် တလက်စတည်း အမေရိကန်နိုင်ငံကိုပါ ဝင်လည်ကြပါတယ်။
🌎Visa ဘယ်လို လျှောက်လည်း
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကနေဒါသံရုံးမရှိလို့ ဗီဇာကို သံရုံးမှာ သွားလျှောက်လို့မရပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားလမ်းရှိ Prime Hill Business Square အဆောက်အအုံမှာရှိတဲ့ VSF Global Myanmar ရုံးကနေ Canada Visa လျှောက်လို့ရပါတယ်။ အဲ့ဒီရုံးမှာ Australia Visa တို့ UK Visa တို့လည်း လျှောက်လို့ရပါတယ်။ Canada Visa နဲ့ ကတ်သက်ပြီး လိုအပ်တဲ့အချက်တွေ သိချင်ရင် http://www.vfsglobal.ca/canada/myanmar/ မှာ ဝင်ကြည့်ပါ။ Visa က ခက်သလားဆိုတော့ မခက်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လွယ်တဲ့ထဲမှာလည်း မပါပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့ ဖောင်တွေ စာရွက်စာတမ်းတွေပြရင် ရဖို့များပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း တခြားနိုင်ငံကြီးတွေ သွားထားဖူးမှ မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လာမယ့်သူတွေဆိုတာ သေချာမှ ပေးတာပါ။ နုမြတ်တို့ဆို မိသားစု၅ယောက်လျှောက်တာ ၅ယောက်လုံးရပါတယ်။ အတူလျှောက်တဲ့ ကျန်တဲ့ သူတွေတော့ Visa မရပါဘူး။ နုမြတ်တို့ကိုတော့ ခရီးခဏခဏသွားနေတဲ့သူတွေမို့လို့လားတော့ မသိဘူး။ တစ်နှစ်အတွင်း စိတ်ကြိုက်သွားနိုင်တဲ့ Multiple Visa ကို မလျှောက်ဘဲနဲ့တောင် ပေးလိုက်တာ အံ့အားသင့်စရာပါ။ Visa လျှောက်ချိန်က ၄ပတ်ကနေ ၆ပတ်ကြား ကြာတတ်လို့ သွားမယ်ဆို စောစောလျှောက်သင့်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆို ကနေဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အတော်အသင့်သိလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ကနေဒါစားရိတ်ငြိမ်းခရီးစဉ်တွေကို သုခလမ်းညွှန် Travels & Tours – Outbound Dept; ဖုန်းနံပါတ် 09977906677 က စီစဉ်ပေးနေလို့ သွားလည်ချင်ရင် စုံစမ်းကြည့်ကြပါနော်။ ကနေဒါမှာက လည်ပတ်လို့ကောင်းတဲ့အပြင် ပညာရေးလည်း အရမ်းကောင်းပါတယ်။ ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျောင်းတွေတက်ချင်ရင်တော့ ကနေဒါ ရောက် မြန်မာတယောက် PAGE မှာစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်နော်။
ဒီပို့စ်ကိုနှစ်သက်သဘောကျရင် Like နဲ့ Share လုပ်လို့ရပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း စိတ်ဝ်စားစရာနိုင်ငံတွေ၊ နေရာတွေ၊ ခရီးတွေ အကြောင်း တင်ပေးဦးမှာမို့လို့ Nu Myat around the World page ကို Like and See First လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်နော်။
August 20, 2019 April 20, 2021 Posted in Asia, Europe, Travel, Turkey, UncategorizedTagged Asia, Europe, TravelLeaveacomment
တူရကီက ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စိတ်ရောဂါကုဆေးရုံကြီး
ရှေးခေတ်က ယဉ်ကျေးမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားခဲ့တဲ့ တူရကီနိုင်ငံမှာ ရှေးဟောင်းမြို့ကြီးတွေ အဆောက်အအုံကြီးတွေရှိနေသလို ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး စိတ်ရောဂါကု ဆေးရုံကြီးလည်း ရှိနေပါတယ်။
ဒီဆေးရုံကြီးကတော့ တူရကီအနောက်ပိုင်း Izmir ပြည်နယ် Bergama မြို့နားက Pergamon မြို့ဟောင်းမှာရှိတဲ့ Asklepion (အက်စ်ကလီပီယွန်)ဆိုတဲ့ ရှေးဟောင်း ဂရိဆေးရုံကြီးပါ။
ဘယ်လောက်တောင်ရှေးကျလည်းဆိုရင် ဘီစီ ၄ရာစုကတည်းက တည်ဆောက်ခဲ့တာဆိုတော့ နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀ကျော် သက်တမ်းရှိနေပါပြီ။ ရှေးခေတ်က ဂရိတွေရဲ့နာမည်ကြီး ဆေးကုသမှုစင်တာဖြစ်ပြီး ကုသမှုဆိုင်ရာ ဂရိနတ်ဘုရား Asklepio ကို ရည်စူးပြီးဆောက်လုပ်ခဲ့တာတဲ့လေ။ တူရကီနိုင်ငံ ရောမလက်အောက်ရောက်နေတဲ့ အေဒီ ၂ရာစုမှာ ရောမလူမျိုးတွေအကြား အကောင်းဆုံး ဆေးကုသမှုစင်တာတစ်ခုအဖြစ် ထင်ရှားလာခဲ့ပါတယ်။
နုမြတ်တို့ တူရကီနိုင်ငံသွားလည်ခဲ့တုန်းက ဒီဆေးရုံကြီးကိုရောက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ Asklepion ကြီးက ဆေးရုံ ဆေးခန်းထက်စာရင် Wellness Center တို့ Spa နဲ့တောင်တူနေပါသေးတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကုထုံးတွေက ရွှံ့ရည်စိမ်ရတာတို့၊ တေးဂီတဖျော်ဖြေပွဲတို့၊ နှိပ်နယ်တာတို့ဆိုတော့လေ။ မိုက်တယ်နော်… အဲ့ဒီကုထုံးတွေအပြင် အစားအစာကုထုံး၊ စိတ်ရောဂါကုထုံး၊ ဆေးဘက်ဝင်အပင်ကုထုံး၊ ရေစိမ်ကုထုံး၊ အိပ်မက်ဖတ်ကုထုံးစတဲ့ ကုထုံးတွေကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ကြတာတဲ့။ ဒါကြောင့်လည်း အခုခေတ်လိုမဟုတ်ဘဲ အဲ့ဒီခေတ်က ဆေးရုံတက်ချင်သူတွေ များမှများပဲလို့ သိရပါတယ်။
ဆေးရုံကြီးက တောင်ကုန်းတွေကြားမှာရှိတော့ တည်နေရာကတင် အေးချမ်းသာယာလှပါတယ်။ေ ဆးကုသမှုခံယူလိုသူတွေအနေနဲ့ ဆေးရုံကြီးဆီကို ၂၆၉၀ပေရှည်ပြီး တိုင်တွေစီတန်းပြီးရှိနေတဲ့ ခမ်းနားလှတဲ့ လမ်းကြောင်းကနေ ဝင်ရပါတယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းကြီးက ရှေးခေတ်ဂရိတောင်ပေါ်မြို့နဲ့ ဆေးရုံကြီးကြားဆက်သွယ်ပေးတဲ့ လမ်းကြောင်းကြီးပေါ့။ လမ်းကြောင်းအဆုံးမှာ ပြိုကျနေတဲ့ ဂိတ်ဝကြီးရှိပါတယ်။
ဂိတ်ပေါက်ကနေ ဝင်ဝင်ချင်းတွေ့ရတဲ့ ဝင်းထဲမှာတော့ အခုခေတ်ဆေးပညာရဲ့ သင်္ကေတအမှတ်တံဆိပ် မြွေရုပ်ပုံ ထွင်းထုထားတဲ့တိုင်လုံးကြီးရှိပါတယ်။ ဝင်းရဲ့ ညာဘက်က အင်ပါယာဘုရင်အခန်းဖြစ်ပြီး စာကြည့်တိုက်အဖြစ်လည်း သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အနီးအနားမှာ စက်ဝိုင်းပုံ အမိုးခုံး ကျောင်းဆောင်ကြီး ရှိခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
အဲဒီကနေဆက်သွားရင် မြေအောက်ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကြီးရှိပါတယ်။ ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်းကို ကုထုံးအခန်းတွေ အဖြစ်ရော အိပ်ခန်းတွေအဖြစ်ပါ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီအိပ်ခန်းတွေက အိပ်မက်တွေကို ဖမ်းဆုပ်နိုင်တဲ့ အိပ်ခန်းတွေဖြစ်ပြီး ညကမက်တဲ့ အိပ်မက်တွေကို အဓိပ္ပါယ်တွေကောက်ကာ သင့်တော်တဲ့ ကုထုံးတွေ ရွေးချယ်ပေးပါတယ်။ ရှေးခေတ်ဂရိတွေက Asklepios နတ်ဘုရားက အိပ်မက်လာပေးတာလို့ ယူဆတာကြောင့် အိပ်မက်တွေဟာ ရောဂါကုသရာမှာအရေးပါတယ်လို့ မှတ်ယူထားကြပါတယ်။
ဝန်းထဲမှာ ရေကန်နဲ့ ရေပန်းပေါင်း ၃ခုရှိပြီး ဒီရေတွေကို သောက်ရေ၊ စိမ်ရေအပြင်၊ ကုထုံးတွေမှာ သုံးခဲ့ကြပါတယ်။ အဆောက်အအုံတွေ ပြိုကျပျက်စီးနေပေမဲ့ ရေပူစမ်းရေပန်းက ရေတွေ ခုထိစိမ့်ထွက်စီးဆင်းနေတုန်းပဲလေ။ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ဒီရေပူစမ်းက ရေတွေက ရေဒီယိုသတ္တုကြွဂုဏ်သတ္တိရှိတယ်ဆိုတာကို နောက်ပိုင်းမှာ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး အခုချိန်ထိ တချို့ရောဂါတွေကို ကုသပေးနိုင်တုန်းပဲတဲ့လေ။ ရေစိမ် ရွှံ့စိမ်တဲ့ Bathtub တွေကလည်း မိုက်မှမိုက်။ ရေစိမ်ကန်တွေကိုဆောက်ထားတဲ့ အုတ်တွေဆိုအကြီးကြီးတွေပဲ…
စာကြည့်တိုက်နဲ့ ကဇာတ်ရုံကြားထဲ တိုင်ကြီးတွေ စီတန်းပြီးရှိနေပါတယ်။ ကဇာတ်ရုံဆိုတာကြီးကလည်း အကြီးကြီးပဲရော။ လူပေါင်းထောင်ချီပြီး ကြည့်လို့ရတာတဲ့လေ။ တောင်စောင်းမှာရှိတာဆိုတော့ တောင်စောင်းအဆင့်ဆင့်ထိုင်ခုံတွေ စီတန်းထားတာ အခုထိအကောင်းတိုင်းရှိနေဆဲပဲ။ ဂီတကုထုံးနဲ့ ကုသဖို့အတွက် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွေ လုပ်ပေးတယ်တဲ့လေ။ ဆေးရ့ုလာတက်တာ စတိတ်ရှိုးပါ ကြည့်ရတယ်။ မိုက်တယ်ရော…
ရှေးခေတ်ဂရိတွေက စိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာမှ ကျန်းမာရေးကောင်းမယ်လို့ ယူဆထားကြလို့ ဒီလို ကုထုံးတွေအသုံးပြုခဲ့ကြတာတဲ့လေ။ တချို့ကုထုံးတွေဆိုရင် အခုခေတ်မှာ တဖန်ပြန်လည်ခေတ်စားလာတာကြောင့် တကယ် အစွမ်းထက်မယ်ဆိုတာ မယုံမရှိပေါ့လေ။
အဲ့ဒီလိုသာ အိပ်လိုက်စားလိုက်၊ ရေစိမ်လိုက်၊ အနှိပ်ခံလိုက်၊ သီချင်းနားထောင်လိုက်နဲ့ ကုသရမယ်ဆိုရင် စိတ်ချမ်းသာတာနဲ့ ရောဂါတစ်ဝက်လောက်ပျောက်နေပြီနော်… ဟုတ်တယ်ဟုတ် ???
August 20, 2019 April 20, 2021 Posted in Adventure, Asia, Travel, UncategorizedTagged Asia, Beach, indonesia, Island, morotai, TravelLeaveacomment
August 20, 2019 April 20, 2021 Posted in Asia, Europe, Photo Essay, Travel, Turkey, UncategorizedTagged Asia, Europe, Experience, Travel, TurkeyLeaveacomment
တူရကီနိုင်ငံက သမိုင်းဝင်အဆောက်အအုံတွေ၊ မြေအောက်မြို့တွေ၊ နန်းတော်တွေ၊ ရှေးဟောင်း မြို့ပျက်ကြီးတွေနဲ့ ပြည့်နေတဲ့နိုင်ငံပါ။ အရောင်အသွေးစုံတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုတွေ၊ အရသာရှိတဲ့ စားသောက်ဖွယ်ရာတွေ၊ အံ့သြဖွယ်ရာ ဆန်းပြားလှတဲ့ ရှုမျော်ခင်းတွေကိုလည်း တွေ့မြင်ရနိုင်ပါတယ်။ ရှေးခေတ် ကုန်သွယ်ရေးမှာ အရေးပါခဲ့တဲ့ ပိုးလမ်းမလမ်းတလျှောက်မှာ အင်မတန် အချက်အချာကျတဲ့ နေရာမှာရှိတဲ့ နိုင်ငံပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အာရှနဲ့ ဥရောပတိုက် (၂)တိုက်လုံးမှာ ရှိတဲ့ နိုင်ငံဖြစ်နေလို့ပါ။ နိုင်ငံရဲ့ ၉၇%က အာရှမှာရှိပြီး ၃%က ဥရောပမှာရှိနေပါတယ်။ တိုက်နှစ်တိုက်ကြားမှာရှိတဲ့ ဘော့စ်စဖရပ်ရေလက်ကြားမှာ အာရှနဲ့ ဥရောပကိုဆက်သွယ်ပေးတဲ့ တံတား(၃)စင်းနဲ့ ရေအောက် ဥမင်လှိုဏ်ခေါင်း (၂)ခုရှိပါတယ်။
အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့(Istanbul)ကလည်း တိုက်နှစ်တိုက်ကို ခွထားတဲ့မြို့ပါ။ အစ္စတန်ဘူလ်က နှစ်ပေါင်း ၂၀၀၀ ကျော်ကြာ ရောမ၊ အော်တမန်နဲ့ ဘိုင်ဇန်တိုင်း အင်ပါယာသုံးဆက်တိုင်အောင် မြို့တော်ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ နာမည်ကျော်မြို့ပါ။ အခုလက်ရှိမှာတော့ မြို့တော်က အန်ကာရာ(Ankara)ဖြစ်ပြီး အစ္စတန်ဘူလ်မြိုကတော့ အကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်နေပါတယ်။ တတိယအကြီးဆုံးမြို့ကတော့ အစ်ဇမဲမြို့(Izmir)ပါ။
တူရကီမှာကမ္ဘာ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်နေရာပေါင်း (၁၀)ခုကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအံ့ဖွယ်(၇)ခုထဲက နှစ်ခုလည်း ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Temple of Artemis ကျောင်းဆောင်ကြီးရှိရာ ရှေးဟောင်းဂရိမြို့တော်ကြီး Ephesus က ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှပါတယ်။ ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံး စာကြည့်တိုက်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ Library of Celsius၊ လူပေါင်း ၂၄၀၀၀ ကျော်ဆန့်တဲ့ ကဇာတ်ရုံကြီး၊ ရှေးခေတ်က အကြီးဆုံး ဈေးဝယ်စင်တာကြီးတွေလည်း မြို့ထဲမှာ ရှိခဲ့ဖူးတာတဲ့လေ။
အပျိုစင်မယ်တော်မာရီရဲ့ နောက်ဆုံးရက်တွေကို ကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့ ဘုရားကျောင်းလည်း ဒီမြို့မှာ ရှိပါတယ်။ ဘာဂမာမြို့ (Bergama)မှာတော့ ရှေးခေတ်က ရောမတို့ရဲ့ဆေးရုံဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံးစိတ်ရောဂါကုဆေးရုံရှိပါတယ်။
တူရကီမှာ ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေအပြင် ဆန်းကြယ်တဲ့ သဘာဝတရားတွေလည်း ရှိလို့နေပါတယ်။ ထုံးရေပြာအိုင်လေးတွေ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်နေတဲ့ Pamukkale နယ်မှာရှိတဲ့ Cotton Castle လေးက သိပ်လှပြီး တူရကီမှာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်အလာအများဆုံးနေရာပါ။ ဟိုးရှေးတုန်းက မီးတောင်ကြောင့် တောင်စောင်းမှာ ကန်လေးတွေ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်နေတဲ့အပြင် တောင်ပေါ်ကရေပူစမ်းကနေ စီးကျနေတဲ့ ရေတွေက ကန်လေးတွေထဲစိမ့်ဝင်တော့ ရေအိုင်လေးတွေ အဆင့်ဆင့်ဖြစ်နေတာပါ။ ရေထဲမှာ ထုံးဓာတ်လည်းပါတော့ အနည်ထိုင်ပြီး ရေအိုင်လေးတွေဖြူနေတာကလည်း ဒီနေရာကို ပိုပြီးဆန်းသစ်စေပါတယ်။
ရှေးနှစ်သန်းပေါင်းများစွာက မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုတွေကြောင့် တစ်နယ်လုံး ကျောက်တောင်အချွန်းတွေနဲ့ ဆန်းကြယ်လှတဲ့ Cappadocia နယ်ကလည်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ မီးပုံးပျံစီးဖို့ အလှဆုံးနေရာအဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။ ထူးဆန်းလှတဲ့ကျောက်ဆောင်ချွန်ချွန်ကြီးတွေ ပြန့်ကျဲနေတဲ့အပေါ်မှာ ရောင်စုံမီးပုံးပျံတွေ ရာနဲ့ချီ ပျံသန်းတာ အတော်ကိုလှတဲ့ မြင်ကွင်းပါ။ Cappadocia မှာ ကျောက်ဂူထဲထွင်းဆောက်ထားတဲ့ဘုရားကျောင်းပေါင်း၂၀၀ လောက်ရှိတဲ့ထဲက Göreme Open Air Museum မှာတော့ ကျောင်းပေါင်း ၁၀ကျောင်းကို တစုတဝေးထဲတွေ့ရမှာပါ။ ကျောက်ဂူတွေမှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ ကျောက်ဂူလူသားတွေအတိုင်း နေထိုင်နိုင်မယ့် ကျောက်ဂူဟိုတယ်တွေလည်း များစွာရှိပါတယ်။